Ahoana ny fomba fifandraisana amin'ny lehilahy?
Ao amin'ny fiainan'ny olona rehetra, misy ny fotoana ifanakalozanao ny "anao", ny fitiavana, ny manomboka fifandraisana izay mihamitombo amin'ny zava-dehibe, dia afaka mifamatotra amin'ny fanambadiana ianao. Saingy na ho ela na ho haingana, dia misy olana eo amin'ny fifandraisanao. Tsy ny olon-drehetra no afaka mandresy ny mpitondratena. Olona tsy manana fahalalana ampy momba izany, ary olona iray sahy niady. Andao hiezaka ny hamantatra ny fomba hitazonana ny fifandraisana ary hampisy ny rivotry ny fitiavana ao anatin'ny fifandraisana.
Ahoana no hananana fifandraisana lava?
Na firy na firy no hihaonanao, inona ny fe-potoan'ny fifandraisanao, amin'ny dingana rehetra amin'ny fivelarany, ny tovovavy sy ny tovovavy dia mila manohana azy ireo, mametraha fihetseham-po amin'io fampandrosoana io, miezaka ny hahatakatra ny fifankahazoana. Mba hahazoana tsaratsara kokoa ny fomba fihazonana fifandraisana amin'ny lehilahy iray dia diniho ny dingana fampandrosoana ny fifandraisana rehetra.
Romantika. Amin'ny teny hafa dia fehezam-boninkazo misy fehezam-boninkazo izany. Momba ity dingana ity dia matetika nosoratan'ny poety - romantika. Maro ireo izay manambady efa ela, te-hahatsiaro indray aho mandritra ny androm-piainako ny orsa voalohany, ny firaisana ara-nofo, ny faniriana ny hiaraka foana. Manana 6 volana eo ho eo io tovovavy io. Ny manodidin'ity sehatra ity dia afaka manao fahadisoana amin'ny namana ianao raha manangana drafitra goavana ho an'ny mpivady. Raha ny zava-drehetra, eo amin'ny sehatra amam-pihetseham-po ianao dia mbola mirenireny eny amin'ny rahona miaraka amin'ny fahasambarana, ary ny mpiara-miasa aminao dia toa tsara ho anao. Raha, amin'izao fotoana izao, ianao dia ampijalin'ny ahiahy mikasika ny hoe mendrika ny mifandray amin'ny hafa, miezaha hahatakatra izay tena tsy mifanaraka aminao amin'ny namana. Angamba, raha vao tapaka avy eny an-tsoroka, dia miresaka mivantana amin'ny lehilahy malalanao ianao mikasika izay manelingelina anao amin'ny fifandraisanao.
Zava-misy. Mijanona tsy mahita ny namana amin'ny alalan'ny "solomaso mavomavo" ianao. Indraindray ianao dia mety ho sahiran-tsaina noho ny fahazaran-dratsin'ny sasany, ny toetran'ny olona. Aza maika hanatsoaka hevitra, eritrereto ny fomba hihazonana fifandraisana amin'ny lehilahy iray. Angamba izy tsy omena tsiny noho ny fifandiranao. Angamba ianao nanitatra loatra loatra amin'ny fifandraisany amin'ny toetrany manokana, fony izy ireo teo amin'ny dingana voalohany amin'ny fifandraisana.
Fanekena. Ity dia karazana fitohizan'ny dingana faharoa. Mahafantatra tsara tsara ianareo. Tsy manana faniriana hanintona ilay tovolahy ianao, fa mifampiankina. Ny fifandraisana dia manan-danja amin'ny fahatakaran-kevitra. Matetika, amin'izao fotoana izao, ny mpiara-miasa dia mandray fanapahan-kevitra na miara-miaina, na manambady. Miezaha hanokatra ny fanahinao amin'ny namana, aoka ho anao sy ny namanao akaiky, izay afaka milaza foana momba izay rehetra mampalahelo.
Fifandirana eo amin'ny mpivady. Rehefa eo ianao amin'izao fotoana izao dia sarotra kokoa ny mahita valiny amin'ny fomba hihazonana fifandraisana amin'ny fanambadiana. Na izany na tsy izany, manana olana maro ianao tamin'ny fandresena, saingy lasa mifamatotra amin'ny tsirairay ianao indraindray fa mila zavatra vaovao. Indrisy anefa, amin'izao fotoana izao, maro ny mpivady tsy afaka mitazona ny fitiavany sy ny ampahany. Tsara ny manamarika fa rehefa mahita ny hery hivoahana amin'io sehatra io ianao, dia hanana traikefa tena manan-danja amin'ny fomba hihazonana ny fifandraisana amin'ny fianakaviana. Ary ho lazaina fa ny fahadisoanao sy ny fanantenanao amin'ny fandanian'ny mpiara-miasa, izay niainga tamin'ny dingana voalohany amin'ny fampandrosoana ny fifandraisana, dia tsy diso. Tadidio fa matetika ny fifandirana, matetika na tsia. Izany dia mampiseho fa ny tsirairay aminareo dia olona iray, ny tsirairay dia manana ny heviny manokana. Ny tena zava-dehibe dia ny fahafahana mahita ny vahaolana tsara indrindra ho anao roa.
Connect. Amin'ity dingan'ny fampandrosoana ity, dia mety ho afaka hilaza izay tokony hataonao ianao mba hihazonana fifandraisana. Raha ny marina, efa nahatratra dingana iray ianao izay manondro fa efa fantatrao ny fitiavana. Mahatsiaro ho tia namana ianao. Indraindray ianao dia mahatsapa fa tena sambatra ianao ary te hizara an'ity fitiavana ity manerana izao tontolo izao. Ny torohevitra tokana - Tohizo ny manatsara amin'ny mpiara-miasa aminao ary tsarovy fa mila miara-miasa amin'ny fifandraisana foana ianao.
Ahoana ny fomba hananana fifankatiavana amin'ny fifandraisana?
Farany dia te-hanamarika ny fomba hiverenana isan'andro miaraka amin'ny olon-tiana aho, amin'ny andro feno romotra, samy hafa amin'ny andro hafa. Miankina amin'ny eritreritrao izany rehetra izany. Tsy midika izany fa mila mandany vola goavana amin'ny fanomezana ianao. Asehoy amin'ny an-jambany am-pitiavana ny namana, amin'ny antso ho azy.
Tsara ny manamarika fa mety hajanona ny fifandraisana amin'ny dingana rehetra amin'ny fivelarany. Ny tena manan-danja amin'izany dia ny fanirian'ny mpiara-miasa.
Aiza no ahafantarana ny olona?
Ahoana indray no hialana amin'ny vadiny?
Ahoana ny fomba hiatrehana ny krizy amin'ny fifandraisana?
Nahoana no miverina ny lehilahy?
Ahoana ny famalifaliana amin'ny vadiny noho ny famadihana - toro-hevitra amin'ny psikology
Famantarana ny fitiavan'ny lehilahy ny vehivavy - psikology
Vehivavy 50 taona aty amin'ny mason'ny lehilahy
Nahoana aho no tia anao?
Daty voalohany amin'ny lehilahy - toro-hevitra amin'ny psikology
Fomba hanomezana lehilahy iray - ny tsiambaratelo
Ahoana ny fomba hangatahana famelan-keloka amin'ny olon-tiana iray?
Tsiambaratelo ny famitahana olona
Fangon'ny fahavaratra amin'ny akanjo 2014
Famantarana ny fisian'ny alahelo
Phloxes - famoahana amin'ny famongorana
Famantarana ny fitiavana amin'ny ankizivavy
Root rafitra fanondrahana
Faniry masim-biby: fomba fanamboarana
Fiafaran'ny fitiavana: Nizara ny fomba i Martin Freeman sy i Amanda Abbington
Iza no anaran'i Kyrosy?
Ahoana ny fomba hanasana akanjo fitetezam-paritra?
Larch eo amin'ny tongotra
Cocoa miaraka amin'ny masomboly
Ny zava-pisotro misy alikaola ho an'ny fatiantoka lany - prescription
Hondrogaard - injections
Ny hernia omanina amin'ny zaza
Fanafody mahomby amin'ny fatiantoka
Heaterana ho an'ny akquarium